Vaovao mahakasika ny Isan-taona
Salama Indro ny vaovao voaray, raha mety mba alefa amin'ny Fiangonana izay maniry ny hanotrona izany isan-taona izany. Tahin'i Jesosy Miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Arakin'ny hafatra izay nalefan'ny tompon-trano dia tsy maintsy mandefa ny liste ny anaran'ny olona présent amin'ny isan-taona isika alohan'ny 28 octobre, izany dia ho fanajana ny plan vigipirate izay apetrak'izy ireo ka izay tsy ao anaty liste dia tsy afaka ampidirin'ny gardien ao Athis Mons. Noho izany dia mila misoratra anarana amin'ity rohy ity izay ho avy hanatrika ny fotoana: https://forms.gle/ef7rtJcdhVQXMAbg6 Misaotra mialoha anareo amin'ny fiarahana miasa tompoko. Mirary tontolo andro feno ny fitahian'i Jesosy. Ny mpitan-tsoratra Rtoa Zo
Miarahaba antsika rehetra. Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 24/10 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ salle Henri bois ao @ CUP. Fidirana @ 11 ora. . Eto an-toerana ny Pastora koa dia hisy ny Batisa sy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo. - SALOMA : Hisy ny fampianarana sekoly alahady izay miditra @ 10 ora. - FIFIL : Hisy ny fotoam-pifohazana ny Sabotsy hariva @ 20h tanterahana ao @ Skype « FLMMontpellier » izay hanasana ny fiangonana rehetra. Ny Tompo anie hitahy antsika.
Isan-taona SP FLME 2021 30-31/10/2021
Teny Faneva : « Fa tsy menatra ny Filazantsara aho ; fa herin'Andriamantra ho famonjena izay rehetra mino izany » Romana 1.16a Toerana hivoriana: Chapelle de l'Établissement privé catholique Saint-Charles 2 Rue Geneviève Anthonioz de Gaulle 91200 Athis-Mons MPAMPIANTRANO : FILEOVANA ILE DE FRANCE ASABOTSY 30 ÔKTÔBRA 2021 13H - 14H30 : FANOMPOAMPIVAVAHANA FANOKAFANA 14H40 - 16H : FAMPIANARANA SORATRA MASINA 16H30 - 18H : ASA SY FAMPAHEREZANA 18H30 - 20H : ANTSAM-PIDERANA 20H - 21H : FIVORIAN'NY KOMITIN'NY SYNODAM-PARITANY FLME ALAHADY 31 ÔKTÔBRA 2021 10H30 - 15H15 : FANOMPOAMPIVAVAHANA ARAKA NY RITOALY FAMARANANA NY ISANTAONA
Miarahaba antsika rehetra. Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 10/10 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ salle Henri bois ao @ CUP. Fidirana @ 11 ora. . Eto an-toerana ny Pastora koa dia hisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo. - SALOMA : Hisy ny fampianarana sekoly alahady izay miditra @ 10 ora. - FIFIL : Hisy ny fotoam-pifohazana ny Sabotsy hariva @ 20h tanterahana ao @ Skype « FLMMontpellier » izay hanasana ny fiangonana rehetra. - KTLM: Hisy ny famerenan-kira @ 10:15 mialoha ny fotoam-pivavahana Fampatsiahivana manokana: Toy ny fanao isan-taona dia voatendry ho ALAHADIN’NY MPITANDRINA ny alahady ho avy izao. Koa dia manasa antsika rehetra mba samy hiomana amin’izany. Ny Tompo anie hitahy antsika